डोटीको एउटा गाउँ, जहाँ पहिरो खस्दा स्थानीय खुशी हुन्छन् - जस्ताको त्यस्तै !
प्रमुख समाचारसमसामयिकराजनीतिअर्थस्वास्थ्य/शिक्षाखेलकुदविश्व समाचारविज्ञान प्रविधिकृषिप्रवासअपराधदुर्घटनासंस्कृति
स्टुडियो कार्यक्रमबाहिरका कार्यक्रमम्युजिक भिडियोनाटकहाँस्यव्यंग्यधार्मिक
डोटीको एउटा गाउँ, जहाँ पहिरो खस्दा स्थानीय खुशी हुन्छन्
प्रकाशित मिति : सोम, भदौ ४, २०७५
डोटी — हर रात सपनीमा ऐठन हुन्छ, सायद गाउँमा पहिरो गयो कि…. गायक दीप श्रेष्ठको यो गीतले धेरैको मन छुन्छ । गाउँबाहिर बसेकालाई आफ्नो गाउँघरमा आइपरेको बाढीपहिरोको विपत्तिले टाढैबाट पनि तर्साइरहन्छ । तर डोटीको आदर्श गाउँपालिका, गिरीचौकावासीका लागि यो अपवाद हो ।
हर रात सपनीमा ऐठन हुन्छ
सायद गाउँमा पहिरो गयो कि….
गायक दीप श्रेष्ठको यो गीतले धेरैको मन छुन्छ। गाउँबाहिर बसेकालाई आफ्नो गाउँघरमा आइपरेको बाढीपहिरोको विपत्तिले टाढैबाट पनि तर्साइरहन्छ।
तर डोटीको आदर्श गाउँपालिका, गिरीचौकावासीका लागि यो अपवाद हो।
यहाँका बासिन्दा गाउँमा पहिरो जाँदा दु:खी हुँदैनन्। बरु अचम्मैसँग खुसी हुन्छन्। गाउँ नजिकैको सिल्लभीरमा पहिरो जाँदा कुनै जनधन क्षति हुँदैन, बरु गाउँलेको आयस्तर बढ्छ। यो भीरमा पहिरो जाँदा घरमा छाना छाउन प्रयोग हुने पत्थर खस्ने भएकाले गाउँले खुसी हुने गरेका हुन्। खसेका पत्थरले छानो छाए पनि भयो अथवा बजार लगेर महँगो मूल्यमा बेचे पनि भयो। जे भए पनि पहिरो आयो कि गाउँमा रौनक छाइहाल्छ। पहिरो खस्नेबित्तिकै तँछाडमछाड सुरु भइहाल्छ— पत्थर बटुल्न।
सौखोलाकी ६८ वर्षीया गौमती बोहरा १३ वर्षको उमेरदेखि पत्थर संकलनको काम गरिरहेको अनुभव सुनाउँछिन्। अहिले शारीरिक कमजोरीका कारण पहिरो छेउछाउ सासू गौतमी जान नसके पनि बुहारी रतना परिवारका सदस्यको हुल लिएर पत्थर संकलनमा जाने गरेकी छन्। ‘कलिलै उमेरमा बिहे गरी सौखोला आएँ,’ गौमतीले भनिन्, ‘पहिरो आएको दिन परिवारका सबै सदस्य पत्थर संकलन गर्छन्।’
गिरीचौकाको यो पत्थर डोटी, बझाङ र बैतडीका विभिन्न क्षेत्रमा निर्यात हुने गरेको छ। तर, पत्थर बटुल्ने होडमा खतरा नभएको पनि होइन। पत्थर संकलन गर्ने क्रममा विगतमा ३ जना गाउँलेको मृत्यु भइसकेको छ।
सिल्लभीर नजिक गाउँ छैनन्। यहाँ बर्सेनि सुक्खा पहिरो जाने गर्छ। यो अग्लो भीर भएकाले सामान्य घाम लाग्दा अथवा पानी पर्दा पनि पहिरो जाने गर्छ। पत्थर संकलनबाटै जीविकोपार्जन गर्ने परिवार पनि गिरीचौकामा छन्। छानो छाउनुपर्दा एउटा घरका लागि बढीमा १ लाख रुपैयाँसम्मको पत्थर आवश्यक पर्ने स्थानीय नरबहादुर ढाँटले बताए। साविकको गाविसमा सचिवको काम गरेका भरतबहादुर नेपालीले पत्थर संकलनबाट एउटा परिवारले एक लाख रुपैयाँसम्म आम्दानी गरेको बताए। तर, अब भने आदर्श गाउँपालिकाले पत्थर संकलन र बिक्रीमा पनि कर लगाउने सोचाइ बनाइरहेको वडाध्यक्ष लालबहादुर कठायतले बताए। उनले खेर गइरहेको प्राकृतिक सम्पदाको सही सदुपयोग गर्न आफूहरू स्थानीयसँग छलफल गरिरहेको बताए।
‘म सानो छँदादेखि नै पहिरो खस्दा पत्थर संलकन गरेर खरिदबिक्री हुन थालेको हो,’ स्थानीय बयोवृद्ध शंकर विकले भने, ‘अहिलेसम्म यहाँबाट करोड रुपैयाँभन्दा माथिको पत्थर बिक्री भइसकेको होला।’ वर्षायाममा बाढी आउँदा नदी किनारमा काठदाउरा संकलन गर्न गाउँले जम्मा भएसरह गिरीचौकामा पत्थर संकलन हुने गरेको विक बताउँछन्।
सिल्लभीरको सिंगो डाँडामा पत्थर खानी छ। अन्य ठाउँका तुलनामा यहाँबाट राम्रो र दिगो पत्थर निस्कने स्थानीय बताउँछन्। ठाडै भिरालो भएकाले पत्थर काटेर/फोरेर निकाल्न मुस्किल छ। पत्थर निकाल्न पहिरो नै पर्खनुपर्ने स्थानीय लोकराज पाठकले बताए। ‘अन्य ठाउँका मानिस गाउँमा पहिरो जाँदा दु:खी हुने गर्छन्, चिन्ता गर्छन् तर हामीले दु:खी हुनुपर्दैन,’ दिपायल बस्दै आएका पाठकले भने, ‘हामीले प्रकृतिबाट राम्रै उपहार पाएका छौं। तर पत्थरको संकलन कार्यलाई व्यवस्थित गर्नु आवश्यक देखिएको छ।’
प्रकाशित : भाद्र ४, २०७५
साभार कान्तिपुर खबरबाट
तस्वीरमा हेर्नुस्, पशुपतिमा शिवरात्रिको रौनक
पर्यटनमन्त्री भन्छन् : कोरोना भाइरससँग जुधिरहेको चीनलाई नजिस्क्याऊँ
अन्तराष्ट्रिय लोक साहित्य पुरस्कारबाट कृष्ण कंडेल सम्मानित
खरिपाटी क्वारेन्टाइन : स्थानीय डराएपछि घर–घरमा प्रजिअ, स्वास्थ्यमन्त्री पनि जाँदै
समाजसेवी, सञ्चारकर्मी तथा आंसुगायक कृष्ण प्रसाद कंडेलज्यू प्रति जन्मदिनको शुभकामना …
इन्द्रेणी कार्यक्रमका सञ्चालक कृष्ण कंडेल इजरायल तर्फ प्रस्थान : जेरी र कृष्ण कंडेल बीच एयरपोर्ट मै चल्यो टुक्के दोहोरी
कोरोनाका कारण कोरिया जाने कामदार रोकिए
टर्की र ग्रीस पठाइदिन्छु भन्दै ३२ जनासँग लाखौँ ठगी गर्ने पक्राउ
एक्कासी आवाज आयो – आत्थु आत्थु, गुहार गुहार : गर्भवती पत्नीलाई विनोदले किन लगाए आगो ?
गोकुल बाँस्कोटाविरुद्ध अख्तियारमा उजुरी
आइतबार राष्ट्र बैंकले तोकेको विदेशी मुद्राको विनिमय दर
तनहुँमा दुईवटा बस ठोक्किँदा ४० जना घाइते
कोरियामा रहेका नेपालीलाई दूतावासको अपिल– विशेष सावधानी अपनाउनू
कतै तपाईंलाई डिप्रेसन भएको त छैन ?
किन लाग्छ डर ?
मेयरमा कुकुर निर्वाचित, सपथका लागि सजियो टाईसुटमा
सुचना बिभाग दर्ता नं. १७९५६९ – ०७४–७५
संयोजक / अध्यक्ष –कृष्ण कंडेल
प्रधान- सम्पादक-दिपक घिमिरे
व्यवस्थापक – भक्त ब देउवा
© 2020 all right reserved to indrenisamaj.com | Site By : SobizTrend Technology